Yukarayn oo labada ciid ee Muslimiinta ka dhigeysa maalmo fasaxa iyo sababta - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Yukarayn oo labada ciid ee Muslimiinta ka dhigeysa maalmo fasaxa iyo sababta
Dalkaasi Yukarayn ee Ruushku cod iyo xoog uga qaatey dhulka Karaymiya ayaa sheegtay in ay labada maalmood ee waaweyn ee ciidaha Muslimiinta ka dhigi doonto maalmo qaeran oo fasaxa.
Hadaba Yukarayn intee Muslimiina oo ku nool maxaase loo yaqaanaa magacooda. Dadka Muslimiinta ee ku nool Yukaraynta ay ka maqan tahay Karaymiya ayaa tira ahaan lagu qiyaasay 80 ila 100 kun oo Muslimiina.
Gobolka Karaymiya oo Muslimiinta loo yaqaan Tataar ay ku noolaan jireen waxa gebi ahaantoodba ka sifeeyay ninkii la oran jirey Istaaliin kadibna waxa si xooga u soo degay dad Ruusha waxyar kadib kacaankii hantiwadaaga.
Yukarayn oo rabta inay soo jiidato Tataarka oo aad u yar ayaa hadyad uga dhigtey labadan ciidood inay ka dhigto maalmo fasaxa. Waxaadse is weydiin kartaa Yukarayn oo 43 milyana maka muuqaan karaan labadaas ciidood.
Si kastaba ha ahaatee waa guul xifaaltana oo u soo hoyatey Tataarka Muslimiinta inkastoo Tataarta badankoodu ku noolyihiin Ruushka.